သင့်နှလုံး ကျန်းမာရေး အတွက် အကောင်းဆုံးနှင့် အဆိုးဆုံး လေ့ကျင့်ခန်းများ
ဒါကြောင့် ကာကွယ်ရေး ဆေးပညာအကြံပေးအဖွဲ့မှာ ပါဝင်တဲ့ နှလုံးအထူး ကုဆရာဝန် Arthur Agatston က အကြံပြုထားတဲ့ နှလုံးအတွက်ရော ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ အကျိုးပြုမယ့် အကောင်းဆုံး လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ သင့်နှလုံးနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိခိုက်စေမယ့် အဆိုးဆုံး လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းများပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်း အစီအစဉ်ထဲတွင် အရှိန်မြင့် လေ့ကျင့်ခန်းကို ထည့်သွင်း လုပ်ဆောင်ခြင်းပုံမှန်အချိန်ကြာကြာ လုပ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း အစီအစဉ်ထဲမှာ အရှိန်မြင့်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကို ထည့်သွင်း လုပ်ဆောင်တဲ့ နည်းဟာ နှလုံးရောဂါနဲ့ ဆီးချိုရောဂါ တွေကို ကာကွယ်မှု၊ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချမှုနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း ပိုမိုထိရောက်မှုတွေ အတွက် ပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ နည်းလမ်း တစ်ခုပါ။
သင့်နှလုံး ခုန်နှုန်းကို မြင့်လိုက်၊ ကျလိုက် ဖြစ်စေခြင်းဟာ သွေးကြောတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ပိုကောင်းစေပြီး အဆီတွေကို ပိုမိုလောင်ကျွမ်းစေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က သွေးထဲမှ အဆီတွေနဲ့ သကြားဓာတ်ကို ဖယ်ရှားရာမှာလည်း ပိုမိုထိရောက်စေပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး လုပ်ဆောင်ရသော အားကစား အားကစားလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုမှာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ရတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားတွေ ပိုများလေ၊ နှလုံးက အဲဒီကြွက်သားတွေဆီကို သွေးတွေပို့ပေးနိုင်ဖို့အတွက် အလုပ်ပိုလုပ်ရလေဖြစ်ပြီး နှလုံးက ပိုသန်မာလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေကူးခြင်း၊ ပြေးခြင်း၊ ဘတ်စကက်ဘောကစားခြင်း၊ ကြက်တောင်ရိုက်ခြင်း စတဲ့ အားကစား နည်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အလေးသုံးပြီး လုပ်ရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကလည်း နှလုံးခုန်နှုန်းကို မြန်စေပြီး နှလုံးကို အကျိုးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကြွက်သားတွေကို သန်မာစေပြီး ခန္ဓာကိုယ် ဟန်ချက်ထိန်းနိုင်မှု အတွက်လည်း အကျိုးပြုပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ဗဟိုချက် ကြွက်သား လေ့ကျင့်ခန်းများ Pilate လေ့ကျင့်ခန်းလိုမျိုး ခန္ဓာကိုယ် ဗဟိုချက်ကြွက်သားတွေကို သန်မာစေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ဟာ ဟန်ချက်ထိန်းနိုင်မှု တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။
ယောဂကျင့်စဉ် လေ့ကျင့်တာကတော့ သွေးကြောတွေကို ကျုံ့ဆန့်နိုင်စွမ်း ပိုရှိစေပြီး သွေးဖိအားကို လျော့ကျစေပါတယ်။ နှလုံးကျန်းမာရေးကိုလည်း တိုးတက်စေပါတယ်။
တစ်နေ့လုံး လှုပ်ရှားတက်ကြွနေခြင်း အိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာ၊ ခြံထဲမှာ သစ်ပင်စိုက်တာ၊ ကားရေဆေးတာ စတာတွေလုပ်ပြီး တစ်နေ့လုံး လှုပ်ရှားတက်ကြွနေသူတွေဟာ တစ်နေ့မှာ ၃၀-၆၀ မိနစ်ကြာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးနောက် တစ်နေ့လုံး ကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင်နေသူတွေထက် ကယ်လိုရီတွေ ပိုလောင်ကျွန်းကာ ပိုကျန်းမာကြပါတယ်။
ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် ပြေးခြင်း ကျောက်ပြားခင်းထားတဲ့ ပလက်ဖောင်းလိုမျိုး မျက်နှာပြင်မှာ အချိန်ကြာကြာပြေးနေသူတွေဟာ ကိုယ်လက်တွေ နာကျင်ကိုက်ခဲပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရတတ်ပါတယ်။ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ ပြေးခြင်းဟာ နှလုံးကို သန်မာစေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်မလဲလို့ ရွေးချယ်ရာမှာ သင့်ကျန်းမာရေး အတွက် အကျိုးပြုတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ဖို့ လိုသလို သင်ဝါသနာပါတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းမျိုး ဖြစ်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နှိပ်စက်နေတယ်လို့ မခံစားရဘဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ စွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်ဖြစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Burma Democratic Concern at 20:35
သင့်နှလုံး ကျန်းမာရေး အတွက် အကောင်းဆုံးနှင့် အဆိုး...
National League for Democracy Statement No. 11/10/...
National League for Democracy Statement No. 10/10/...